Ausmandu, Author at AusMandu
Ausmandu 87 posts0comments
अष्ट्रेलियामा बस्ने नेपाली विद्यार्थीहरुको कथा समेटिएको म्युजिक भिडियो ‘विद्यार्थी’…
अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा छायांकन गरिएको नेपाली म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । संजय सेन्चुरीले छायांकन तथा निर्देशन गरेको उक्त म्युजिक भिडियो 'विद्यार्थी'मा सत्य कथालाई कलात्मक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । 'विद्यार्थी' गीतलाई कपिल…
Ausmandu Nov 15, 2018
आमा ! जब घरबाट कामको लागि निस्किन्छु, त्यतिबेला 'म गएँ है' भनेको सुनिदिने कोही हुँदैन । अनि.. कलेज जाँदा 'मम्मी म गएँ है' भनेको सम्झिन्छु अनि तिम्रो याद आउँछ । घरमा 'यो तरकारी मन पर्दैन' भन्दै झगडा गर्ने म, यहाँ चाउचाउ खाँदै हप्ता…
Ausmandu Oct 24, 2018
अस्ट्रेलियाको पर्थमा उपचारको क्रममा साढे तीन वर्षीय एक बालकको निधन भएको छ । बालक निहित सिवाकोटीको २०१८ अक्टोबर 8 मा निधन भएको हो । निहित सिवाकोटीका बुवा आमा अस्ट्रेलियामा Temporary Visa मा हुनुहुन्छ । निहित बिरामी भएपछि विगत ९ महिना देखि…
Ausmandu Oct 10, 2018
आफूलाई क्यान्सर भएको भन्दै झुट बोलेर Donation बटुलेकी Adelaide की एक महिलालाई अदालतले जेल सजाय सुनाएको छ । Kelly Val Smith नाम गरेकी ती महिलाले आफूलाई Ovarian Cancer भएको र छोराको heart operation गर्नुपर्ने भएको भन्दै आफ्ना आफन्त, परिवार र…
Ausmandu Oct 4, 2018
ओठमा हासाेँ ,काधँमा जिम्मेवारी । बोकियो भारी, दुख्दैछन् तिघ्राका मासु अनि,हातका यी नाडी।। दिनभरिको त्यो Casualकाम, अनि साझँ हात परेको त्यो सेतो खाम । थकित ज्यान पल्टाउँदै के थिएँ, म्यासेजमा भन्ने गर्छन् साथीभाई मोज छ तँलाई,…
"मेरो घर त एकदम स्टृक्ट छ, कसरी भन्ने हो त सबै" । म ठ्ट्टामा भनिदिन्थे "नमाने, नेपाल देखि अष्ट्रेलिया भगाउला नि , हुदैन?" हास्दै उत्तरमा उ भन्ने गर्थी "बरु म चाहिँ हजुरलाई भगाएर अमेरिका लग्छु" ।
Ausmandu Sep 24, 2018
हरेक दिन सिकाइ हो रे ! अस्ट्रेलिया आएपछि थाहा भयो, साँच्चै हरेक दिन सिकाइ रहेछ । सुनेर, पढेर भन्दा भोगेपछि मानिसले धेरै सिक्छ रे, साँच्चै रहेछ । मैले सिक्न बाँकी धेरै कुरा रहेछन् , जुन यहाँ आएर सिकिरहेको छु र यो सिकाइ निरन्तर चलिरहेको छ ।…
Ausmandu Sep 20, 2018
जेफ बेजस प्रसिद्ध व्यवसायी हुन्। विश्वका धनी व्यक्तिहरु मध्ये पर्ने उनी अनलाइन बजार एमाजोनका संस्थापक हुन्। हावर्ड बिजनेस रिभ्युले जेफलाई विश्वकै सबैभन्दा राम्रो सीइओमा दोस्रो स्थानमा राखेको थियो। फोर्ब्स म्यागजिनले हालै सार्वजनिक गरेको…
Ausmandu Sep 19, 2018
यदि अकाउनटेन्ट हुनुहुन्छ र क्विन्सल्याण्डको स्टेट स्पोन्सरशिप चाहनुहुन्छ भने अब रिजल्ट तपाईंको पक्षमा नआउन सक्छ । बिजनेस एण्ड स्किल्ड माइग्रेसन क्विन्सल्याण्डले आफ्नो स्किल्ड अकुपेशन लिस्टबाट 'अकाउनटेन्ट' पेशा हटाएको छ । सोमबार वेबसाइटमा…
तपाईं कतै ठगिइरहनु भएको त छैन ? चलाख बन्नुहोस्, कानुन र आफ्नो हकको बारेमा जानकारी राख्ने गर्नुहोस् । एक भारतीय व्यक्तिले स्टुडेन्ट भिसा होल्डरहरु, विशेषगरि भारतका विद्यार्थीहरुलाई ठग्ने गरेको खुलेको छ । उनले १२ जना विद्यार्थीहरुलाई…